Igalari House Grey Whale - I-Airbnb
Igalari House Grey Whale
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguJav
Indlu yokhuni kwisitayile selali yokuloba, epholileyo kakhulu, ngaphambili nangasemva iigadi ezinonxweme nje ngeemitha ezingama-300 apho iminenga engwevu ifika ngexesha lasebusika. Ngeendawo ze-mangrove kunye nesiqithi seendunduma ezine-colon of sealions. Ngaba nonke bamkelekile kwi-adventure yolwandle kunye nentlango. (UNGABUKA UKHENKETHO LWE-WALE NATHI)
Izinyuko ezimbalwa ukusuka kwindawo ehlala kuyo iminenga engwevu. Bayafika
ngenyanga kaJanuwari kwaye bathatha umhlala phantsi kwinyanga kaMatshi. Indawo apho bagxile kwiintlobo ngeentlobo zeentaka zaselwandle kunye neentaka ezifudukayo kuba indawo ibala kwiimangrove. Intlango ikwabonelela ngezilwanyana zasekhaya ekulula ukuzibona. ukuba nangaphezulu unokuyonwabela ukuba ungumthandi wendalo. Siququzelela uqhagamshelwano neenkonzo zabakhenkethi zendawo, ukubukela i-whale, ukuloba, ukuhamba entlango kunye neSiqithi saseMagdalena.
Ilali yokuloba, inabemi abangama-2300. Ke ungakonwabela ukuzola kude nengxolo, ngexesha lonyaka womnenga le ndawo inomsebenzi omninzi wokhenketho abantu abavela kwihlabathi liphela bayindwendwele ukuze babe namava asondeleyo kakhulu ngeminenga engwevu. Ngoko abemi baqhele ukunikela ingqalelo kundwendwe ekubeni ilixesha lonyaka elenza ingeniso kuluntu lonke.
Umbuki zindwendwe ngu- Jav
Sikwinkonzo yakho, ukukunceda ukuba ube nexesha lokuhlala ubadibanisa neenkonzo zokhenketho zasekhaya